လုပ်တတ်ပြီးလား အလုပ်? အပိုင်း (၁) - IT-KOKO
အလုပ်မှာ လုပ်စရာမရှိ မဖြစ်အောင်နေ။
များသောအားဖြင့် အလုပ်မများဘူးဆိုရင် အေးအေးဆေးဆေးဘဲ ဆိုပြီး ထင်တတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ လုပ်စရာ မရှိတာ မကောင်းပါဘူး။ ပိုပြီးတော့ အလုပ်များဖို့ အရှိန်ယူနေသလိုပါဘဲ။ တစ်ခုခု ကြီးကြီးမားမား လာရင် အစဉ်သင့်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားပါ။ နောက်တစ်ခုက တခါတလေ၊ လုပ်စရာပြီးသွားလို့ ဘားမှလုပ်စရာမရှိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို မန်နေဂျာ၊ သူဌေးတို့မြင်ရင် အလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ ထင်နိုင်တယ်။ အားနေတယ်ထင်ပြီး မဟုတ်တဲ့ အလုပ်တွေ ခိုင်းတတ်တယ်။ အဲ့တော့ ကိုယ်အလုပ်ကို တစ်နေ့တာ အတွက် ကြိုတင် ချိန်စပြီး လုပ်ပါ။ အချိန်ပို မဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ အလုပ်ကလည်းအပြီး အလုပ်ဆင်းချိန်လည်း အရောက် ဖြစ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးဘဲ။
ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး အရေးကြီးတယ်။
နုံသလို့ လို၊ အသလိုလိုနဲ့ ဘယ်သူနဲ့မှ စကားမပြေဘဲ မနေပါနဲ့။ သူတို့က အရောမဝင်လို့ ကိုယ်လည်း မဝင်ဘူးဆိုပြီး မာနကြီး မထားပါနဲ့။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖတ် အားလုံးနဲ့ အရောမဝင်ရင်တောင်၊ ကိုယ်နဲ့အတူတူလုပ်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တော့ အရောတဝင် နေပါ။ အဟုတ်ရင် အဖွဲ့မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ အစဉ်မပြေသလို့ အလုပ်ပြီးဖို့လည်း ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ လူကြီးတွေကိုတော့ အလိုက်အထိုက် ကြည့်ပေါင်းရမယ်။ လူပေါကြီး မဖြစ်အောင်တော့ စကားပြောရင် တည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့ အနောက်အပြောင် ရှော့ပေါ့။ ပျော်ပျော်နေလို့ရတယ်။ အလုပ်မှာ ပျော်ပွဲတွေ များများ ရှတာကောင်းပါတယ်။
စကားပြောတာ စည်းကမ်းရှိပါ။ လုပ်တာကိုင်တာ စည်းကမ်းရှိပါ။ အနေအထိုင် စည်းကမ်းရှိပါ။ အိမ်သာသွားတာကအစ စည်းကမ်းရှိပါ။ ပစ္စည်းတွေထားတာ စည်းကမ်းတကျ ထားပါ။ စကားကို လွယ်လွယ် မပြောပါနဲ့၊ ကတိ လွယ်လွယ် မပေးပါနဲ့၊ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာကို အတင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ ကတိမပေးမိပါစေနဲ့။ လုပ်စရာရှိတာ၊ ပေးစရာရှိတာ အချိန်မှီ မပေးနိုင်တာ မကောင်းဘူး။ ကြိုတင်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် အချိန်ပိုယူရမယ်။ စသည်ဖြင့် ကြိုတင် စကားခံပြီးမှ အလုပ်ကိုလက်ခံပါ။ deadline အရေးကြီးတယ်။
အလုပ်မှာ သင်စရာ အများကြီးပါ။ ကိုယ်လိုအပ်ချက်တွေကို ရအောင် ကြိုးစားပြီး ဖြည့်ပါ။ လိုရင် လိုသလို သင်တန်းတတ်ဖို့၊ လိုအပ်တဲ့ skill set တွေ ဖြည့်ဖို့ အမြဲ တွေးနေပါ။ အားရင်အားသလို့ training, courses တွေ သွားဖို့ လူကြီးကို ပြောကြည့်ပါ။ သိထားရမှာတစ်ခုက အလုပ်လုပ်နေတာ စားဖို့၊ ပိုက်ဆံရဖို့ကြီးဘဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘဲ။ အမြဲတမ်း လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်နေပါ။ ကိုယ်အတွက် အခွင်းအရေးဆိုတာ မြင်ရတာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ်ဘက်က အမြဲကြိုးစားနေဖို့ လိုတယ်။
မိမိကို cover ပေးနိုင်မယ့် rules တွေထားပါ. ပြဿနာ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် ကိုယ့်အပေါ်ကျလာတာမျိုး မဖြစ်အောင် ကိုယ်ဘက်က cover လုပ်ထားပါ။ သူများအပြစ် ကိုယ်အပြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို တားနိုင်မယ့် rules လေးတွေလုပ်ထားပါ။ eg. ကျွန်တော်ဆို သူများဒီဇိုင်းကို ကိုင်ပြီဆိုရင် ကိုယ်နာမည်နဲ့ ပြန် save လုပ်တယ်၊ override မလုပ်ဘူး။ နောပြီး client က သူ့ဒီဇိုင်းကို ပေးရင် မှာနေရင်တောင် ကိုယ့်ဖာသာ မပျင်ဘူး။ client ကို ပြန်ပေးပြီး ဘာမှားနေပါတယ်ဆိုပြီး ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ sales က လူကြီးက မင်းလုပ်ပေးတာ ရရဲ့သားနဲ့ဆိုပြီး ပြောတော့ အကယ်၍ အမှားတစ်ခုကို အားလုံးထုပ်ပြီးမှ သိတယ်ဆိုရင် မင်းရောမှာလားလို့။ client က မင်းတို့ လုပ်လို့ ဆိုတာမျိုးပြောလာရင် ကာကွယ်ဖို့ ငါမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ အရေးကြီးလို့ လုပ်ပေးရင် client ဆီက လက်ခံမှ လုပ်။
အလုပ်လုပ်နေရတာကို သူများအတွက် လုပ်ပေးနေရတယ်လို့ စိတ်ထဲမထားဘဲ။ မိမိအလုပ်မိမိ လုပ်နေတယ်လို့ သဘောထားပြီး လုပ်ပါ။ ကိုယ်အလုပ်ကို လုပ်နေရတာ၊ ကိုယ်အတွက် ကိုလုပ်နေရတာဆိုတော့ မောတယ် ပန်းတယ် ဘယ်ရှိနိုင်တော့မလဲ။ နောက်ပြီး ငါလုပ်ရလိုက်တာ။ သူများတွေများ သက်သာလိုက်တာဆိုပြီး သူများအလုပ်တွေကို လိုက်ကြည့်ပြီး အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့။ မိမိ အလုပ် မိမိ ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ အာရုံစိုက်ထားပါ။ သတိထားရမှာက သူများအလုပ်တွေကိုတော့ ကိုယ့်အလုပ် အဖြစ် မခံပါနဲ့။ လည်လည်ဝယ်ဝယ်လေးနဲ့ သူ့ဘက်ကို ပြန်ပုတ်ပေးလိုက်ပါ။ အလိမ်မာ စာမှာရှိဆိုသလို့ email ကောင်းကောင်းလေးပြန်ရေးပေးပြီး ငြင်းလိုက်ပါ။
အပိုင်း ၂ ဆက်မည်…
working life အလုပ်အကိုင်